ကရာနီထက်က ကားသုံးတိုင် - လှမင်းသူ
ကရာနီအမည်ရှိသော အရပ်သို့ရောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ ထိုလူဆိုးတို့ကို လက်ျာ တော်ဘက်၌ တယောက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ တယောက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြ၏။
တခုသော ကားတိုင်ထက်တွင် သူခိုးတယောက်သည် အပြစ်၌ သေဆုံးခဲ့သည်။
အခြားသော ကားတိုင်ထက်တွင် သူခိုးတယောက်၌ အပြစ်သည် သေဆုံးခဲ့သည်။
အလယ်ရှိ ကားတိုင်ထက်၌ကား ပေးဆပ်သူတယောက်သည် အပြစ်အတွက် သေဆုံးခဲ့သည်။
အများအားဖြင့် ကရာနီတောင်ထက်က လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို မြင်ယောင်တဲ့အခါမှာ ခရစ်တော် ရှိနေတဲ့ ကားတိုင်ကိုပဲ အာရုံစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေ့က ကရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာ ခရစ်တော်ရဲ့ လက်ဝါးကားတိုင် တခုတည်းရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ ဂေါလဂေါသ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ခရစ်တော်ရဲ့ ဘေးတဖက်တချက် အခြားကားတိုင် နှစ်ခု ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ရှိနေခဲ့တာလဲ ဆိုတာကော စာဖတ်သူ စဉ်းစားမိကြပါရဲ့လား။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်အတွက် သေဒဏ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ သူခိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြားထဲ၊ အလယ်ထဲမှာမှ ခရစ်တော်ရဲ့ ကားတိုင်ရှိနေခြင်းရဲ့ အရေးပါမှုကိုရော သတိထားမိကြပါရဲ့လား။
ခရစ်တော်ရဲ့ တဖက်တချက်မှာ ရှိနေတဲ့ ကားတိုင်နှစ်တိုင်ဟာ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ရမယ့် လမ်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းဟာ ဒီနေ့ ဒီကမ္ဘာမှာ နေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့လမ်းကိုသာမက ထာဝရကာလမှာ ဘယ်လို နေထိုင်မဲ့လမ်းကို လည်း ရွေးချယ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်တော်ရဲ့ ကားတိုင်တဖက်မှာ ပုန်ကန်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင် ရှိနေပါတယ်။ "သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျှင် ကိုယ်ကို၎င်း၊ ငါတို့ကို၎င်း၊ ကယ်တင်လော့ " လို့ ပုန်ကန်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင် ထက်မှာ ရှိနေတဲ့ သူခိုးက ဆိုပါတယ်။ ခရစ်တော်ခမျာမှာတော့ သူမကျူးလွန်ခဲ့ရတဲ့ ပြစ်မှုအတွက် ကားတိုင်တင်ခံရတာတင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ မိမိအသက်နဲ့ လက်မတင်ကလေး လွဲရုံ၊ မသေရုံ တမယ် ရိုက်နှက်ခံရတာလည်း မလုံလောက်သေးပါဘူး။ မိမိရဲ့ ၀တ်ရုံတော်ကို ထက်ခြမ်းခွဲလို့ ဝေမျှတာကို ခံရတာနဲ့လည်း မလုံလောက်သေးပါဘူး။ သစ်သားကားတိုင်မှာ သံချောင်းနဲ့ ရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့လည်း မလုံလောက်သေးပြန်ပါဘူး။ အနီးအနားလူအများရဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်းသာမက မိမိနဲ့အတူ ကားတိုင်တင်ခံရတဲ့ သူခိုးကပါ ကဲ့ရဲ့တာကို ခံလိုက်ရပြန်ပါသေးတယ်။
လူဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ ကမ်းကုန်အောင် မိုက်မဲပြီး စုံးစုံးမြုပ်တတ်ကြတာကို တခါတရံမှာ အံ့သြမိကြပါလိမ့်မယ်။ သတင်းစာဖတ်ရင်၊ တီဗွီကြည့်ကြရင် ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ ဆိုးယုတ်မှုတွေကို တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ မသမာမှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ကြားမကောင်း မြင်မကောင်းအောင် လူတွေ ကျူးလွန်ကြတာကို တွေ့ရကြပါလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာ တယောက်ကိုတယောက် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ပြုမူဆက်ဆံကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာ နာကျင်မှုတွေ၊ ဆင်းရမှုတွေ နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု၊ ၀မ်နည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်မှုတွေဟာလည်း ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်နေကြတာ သမားရိုးကျ လိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာတွေက ဆိုးလှပြီလို့ အောက်မေ့ရင် အတိတ်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်ကြပါဦး။ ဘယ်ခေတ်အခါမှာပဲ ကြည့်ကြည့် ကြမ်းတမ်းမှုများ၊ ကြေကွဲရမှုများဟာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေရခြင်းအကြောင်းကို ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဒံနဲ့ ဧ၀ ဧဒင်ဥယာဉ်မှာ ဘုရားစကား နာမခံခဲ့တဲ့ အချိန်ကစလို့ လူသားများဟာ ဘုရားရဲ့ အလိုကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်ပြီး ပုန်ကန်လို့ နေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ လူသတ္တ၀ါများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဖီလော်ဆိုဖာအတွေးအခေါ် ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ဘယ်လောက်ပဲပြောနေပါစေ လူဆိုတဲ့ အမျိုးက အခြေခံကိုက မကောင်းတဲ့ အမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောမသြ၀ါဒစာ ၃ မှာ ရှင်ပေါလုက "လူအားလုံး အပြစ်ပြုကြသူများဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဲဒီအပြစ်ဟာ လူတွေရဲ့ အတွင်းထဲတိုင်အောင် အမြစ်တွယ်ပြီး လူတွေရဲ့ ပြည့်စုံနိူင်မှုကို ဖျက်စီးပစ်နေပါတယ်" လို ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်ဆိုတဲ့ အရာကြောင့်ပဲ ဘုရားသခင်ဟာ အမျက်တော်ထွက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်အပေါ် အမျက်ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်တော်ရဲ့ တဖက်မှာ ပုန်ကန်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင် ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလက်ဝါးကားတိုင်ထက်က သူခိုးဟာ ခရစ်တော်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး သူဟာ အပြစ်၌ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု ခရစ်တော် မိန့်တော်မူပါတယ်။
နောက်သူခိုး တယောက်ကတော့ ခရစ်တော်ရဲ့ အခြားတဖက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီသူခိုးဟာလည်း ခရစ်တော်ရဲ့ တဖက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပထမ သူခိုးထက် ပိုပြီး ကောင်းတဲ့သူတယောက်လို့ ယူဆစရာ အကြောင်း သိပ်မရှိလှပါဘူး။ သူခိုးနှစ်ယောက်စလုံးက ကားတိုင်တင်ရာအရပ်ကို သွားတဲ့ လမ်းတလျောက်လုံးမှာ ခရစ်တော်ကို စော်ကားကဲ့ရဲ့ ခဲ့ကြတာကို ရှင်မဿဲထဲမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယသူခိုးဟာ အဖြစ်အပျက် တခုခုကြောင့် ခရစ်တော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ " အိုအဘ၊ သူ့တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပြုသောအမှုကိုမသိကြ" လို့ ခရစ်တော်ရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း စကားကို ဒုတိယ သူခိုးဖြစ်သူ ကြားသွားတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ ဖော်မပြထားတဲ့ အခြားအကြောင်း တခုခုကြောင့်လည်း စိတ်ပြောင်းသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒုတိယ သူခိုးကတော့ ခရစ်တော် ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်သွားပါတယ်။ ပထမသူခိုးက ခရစ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်စကား ထပ်ဆိုတဲ့အခါ ဒုတိယသူခိုးက
"သင်သည် ဤသူနည်းတူ အပြစ်ဒဏ်ခံလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကို မကြောက်သလော။
ငါတို့သည် ကိုယ်ပြုမိသောအပြစ်နှင့် အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍ တရားသဖြင့် ခံရကြ၏။ ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်ကိုမျှ မပြု" လို့
ပထမသူခိုးကို ဆိုပါတယ်။ ပြီးမှ
"သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ" လို့ ယေရှုခရစ်တော်ကို လျှောက်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပုန်ကန်ခြင်းကားတိုင်ထက်မှာ ပထမသူခိုး ရှိနေပေမယ့် ဒုတိယကားတိုင်ထက်က သူခိုးကတော့ စိတ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကားတိုင်ဟာ နောင်တရခြင်းကားတိုင် လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ပထမသူခိုးက အပြစ်၌ သေဆုံးသွားပေမဲ့ ဒုတိယသူခိုးမှာတော့ အပြစ်ကသေသွားပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ သူခိုးဟာ သူ့ရဲ့ အတိတ်က ဒုစရိုက်အမိုက်မှောင်ကို ပြည့်ဖုံးကားချ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာကို ခရစ်တော်ရဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
"ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည်" ဟုမိန့်တော်မူလိုက်ခြင်းဟာ
ခရစ်တော်ဟာ သူခိုးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ဆံခွင့် ရခြင်းအပေါ်မှာ ရှုပ်ထွေးသွားတတ်ပါတယ်။
၁. တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းတွေကိုချည်း ဆက်တိုက်လုပ်နေရင် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တတ်ပါတယ်။
၂. တခါတရံမှာတော့ မိသားစုထဲ တော်စပ်မှုတွေကြောင့် ဘုရားနဲ့ ရင်းနှီးမှု ပိုရကြမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ငါ့အဖိုးကတော့ သင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါလည်းပဲ ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်မှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။
၃. တခါတရံကတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ လုပ်နေရင် ဘုရားက သတိပြုမိပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲကို ၀င်ခွင့် ပြုမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
နောင်တရခြင်းကားတိုင်ထက်က သူခိုးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာ "ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်" ဆိုတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးဆိုတာ သတိထားဖိုပါပဲ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသွား ခရီးလမ်းဟာ ဘုရားရဲ့ သားတော်ဖြစ်တဲ့ ယေရှု ခရစ်တော်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ တခြားဘာနဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူး။ ခရစ်တော်ကိုသာ ယုံကြည်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ လျစ်လျူရှုရင်၊ ငြင်းဆန်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားရဲ့ အမျက်တော်ဟာ ကိုယ့်အပေါ်ကို ကျရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးရဲ့ အချုပ်ကတော့ ဒါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဝဲလက်ယာဖက်မှာ ရှိနေတဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်များ အကြောင်းကိုချည်းပြောခဲ့တာကြောင့် အလယ်မှာ ရှိတဲ အရေးကြီးတဲ့ လက်ဝါးကားတိုင် အကြောင်းကိုတော့ မမေ့စေလိုပါဘူး။ လက်ဝါးကားတိုင် သုံးခုအနက် တခုက ပုန်ကန်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင်၊ နောက်တခုကတော့ နောင်တရခြင်းလက်ဝါးကားတိုင် များဖြစ်ပြီး၊ ခရစ်တော်ရဲ့ လက်ဝါးကားတိုင်ကတော့ ပေးဆပ်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူခိုးတယောက်ကတော့ အပြစ်၌ သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ နောက်သူခိုးတယောက်မှာ အပြစ်သည် သေဆုံးခဲ့ကာ ခရစ်တော်ကတော့ အပြစ်အတွက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ အပြစ်အတွက် အသက်ကို လိုလိုလားလားကိုပဲ ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါသည် ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်၍ နောက်တဖန် ယူဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏။
ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါစွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရ သောအခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။ ထိုအခွင့်ကို ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
အထက်က ကျမ်းပိုဒ်ကို ကြည့်ရင် ခရစ်တော်ဟာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်မကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုအတွက် သေဒဏ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ယူဆခဲ့ရင် မှားလိမ့်တယ် ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲံ အပြစ်အဖိုးအခကို ခံယူဖို့အတွက် အသက်ကိုပင် လိုလိုလားလား ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့အသက်ကို တမင် ပေးခဲ့တာပါ ။ တခြားသူများက သူ့အသက်ကို သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခရစ်တော်ဟာ ပေးဆပ်ခြင်းလက်ဝါးကားတိုင်မှာ သူ့ရဲ့ အသက်ကို ပေးအပ်သည့်တိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာဟာ သတင်းကောင်း တရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားတိုင်နှစ်ခုရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တတွေ သူခိုးနှစ်ယောက်လိုမျိုး ရွေးချယ်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးကို ရောက်နေပြန်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူခိုးမျိုး ဖြစ်ချင်ကြပါသလဲ။
ငြင်းဆန်ပုန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့ ကားတိုင်ထက်က သူခိုးမျိုးလား။ နောင်တရယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ ကားတိုက်ထက်က သူခိုးမျိုးလား။ မှန်သော ရွေးချယ်မှုကို ပြုကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(ကြားနာခဲ့ရသော ဝေငှချက်တခုအား ပြန်လည်ရေးသား တင်ပြအပ်ပါသည်။)